Kusolwa umona kobulawe ngumyeni - Ilanga News
Home Izindaba Kusolwa umona kobulawe ngumyeni
Bese kwenziwe konke bezoshada maduze
nguNkz Vuyisile Ndlovu (41), odutshulwe wabulawa ngumyeni wakhe ngoba emsola ngokuthi useqomile.
ISITHOMBE: NGOSIZO LOMNDENI
KUSOLWA umngani onguphosho-zwayo esigame-kweni sephoyisa okuthiwa lidubule labulala ingoduso yalo ngoLwesibili ebusuku eMgungungundlovu sekusele kancane ukuba ziwusha-ye.
Kusenzima ukuba amukele amalungu omndeni kaNkz Vuyisile Ndlovu (41), wasePlessi-slaer, eMgungundlovu, okusolwa ukuthi udutshulwe wabulawa ngumyeni wakhe – ILANGA elinalo igama lakhe, kodwa elingeke lilidalule ngenxa yokunqindwa wumthetho – emuva kwalokho naye wazingqokloza ngenhlamvu nokho wasinda. Silobe izolo ngo-Lwesithathu elaliswe esibhedlela.
UNkz Nomusa Ndlovu onguda-dewabo kamufi, uthi udadewabo wehlelwe yile mihlola nje, ubehlala naye umsolwa, esemlobole wamqeda waze wembesa, sebenza amalungiselelo omshado.
“Besingekho ngesikhathi kwe-nzeka lesi sigameko, sithole sekufika umbiko kuthiwa udadewethu useshonile, ubulawe ngumyeni wakhe. Bebehlala nezingane zomyeni wakhe esithole ukuthi uqede ukwenza le nto, wabe esebikela zona ukuthi usedubule udadewethu.
“Akukho ebesikwazi ngothando lwabo, futhi ubengakaze asibikele ukuthi banezinkinga. Nathi siwumndeni siyazibuza ukuthi yini le ebisicasule umyeni wakhe ukuthi usengaze athathe isinqumo esinzima kangaka,” kusho uNkz Ndlovu.
ILANGA lithole ngomtho-mbo walo esondelene noNkz Ndlovu – osidonse ngendlebe ukuba singawudaluli ngenxa yokuba bucayi kodaba – ukuthi umsolwa uthole izindaba zokuthi ingoduso yakhe, isinobunye ubudle-lwano, wathukuthela wathe-lwa ngamanzi, wayibulala.
“Sithole ukuthi kunomngani kaVuyisile owahamba wayo-hleba ngaye kumyeni wakhe, wamtshela ukuthi usenesoka, waze walisho nokuthi lingubani.
“Siyasola ukuthi umuntu owenze le nto ubenomona wokuthi laba sebelobolene futhi sebelungiselela ukushada futhi bebehleli kahle singa-kaze sizwe lutho,” kusho umthombo.
la amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, usiqinisekisile lesi sigameko wathi amaphoyisa avule icala lokubulala, umsolwa uboshiwe kodwa usagcinwe esibhedlela njengoba naye edubuleke onyaweni.
Previous articleUmdonsiswano ngobukhosi bakwaZondo
Next articleKuzobhekwa namanye amacala kolukaNgizwe